BASAL FAAFINTA ASAASIGA AH EE SII KORDHAYA OO AAN GEEDO LAHAYN - BOW
Bandhigga basasha iyada oo aan geedo: sii kordhaya iyada oo aan dhibaato lahayn
Jardi-doedku ma sameyn karo basasha. Kala duwanaanshaha bandhigga waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan. Waxay keentay Holland. Ku soo dhawow dhadhanka wanaagsan, dhalidda iyo cabbirka weyn. Maqaalkani wuxuu diiradda saarayaa baska Exibishen iyo sii kordhinta ka soo abuurka ah qaab aan suuq ahayn.
Sharaxaadda iyo astaamaha
Noocyada kala duwan ee noocaan ah waa kuwo aad u ballaaran, waxay gaari karaan qiyaaso laga soo bilaabo 120 ilaa 400 g. Tusaalaha muuqaalku wuxuu loola jeedaa noocyada kala duwan ee basasha, laakiin farsamooyinka beeraha haboon, illaa 3 kg ayaa laga soo qaadan karaa hal mitir oo laba jibbaaran. Dhadhanka khudraddan waa mid macaan, aan lahayn dhadhan qadhaadh. Markuu burburo ma keeno ilmo sababtoo ah xaqiiqda ah in uu leeyahay wax yar oo ah saliidaha lagama maarmaanka ah. Kaliya khasaare kala duwanaanta noocaan ah waa in aan la kaydin muddo dheer. Jiilaalka oo dhan ma been sheegi karo, ugu badnaan - ilaa December.
Ma taqaanaa? Noocyada basasha qaarkood waa geedo qurxoon. Mid ka mid ah kuwan waa noocyo kala duwan ubaxyo casaan ah.
Miyaan u baahanahay in aan tijaabiyo: waxa khabiiradu yiraahdaan
Bandhigga basasha waa la kori karaa iyada oon geedo, abuurka si toos ah dhulka ugu beeran. Habkan waxaa isticmaala soo saarayaasha waaweyn oo leh meelo waaweyn. Khabiiradu waxay ku talinayaan dadka degan xagaaga in ay isticmaalaan habkii hore - iyada oo loo marayo jamac. A gaar ahaan, noocyada kala duwan waxaa ugu fiican koray geedo. Sidan oo kale, waxaad heli kartaa goosashada hore iyo basasha waaweyn, cufkaas oo gaari kara 700 g. Haddii aad isticmaasho beerashada tooska ah, markaa celcelis ahaan qiyaasta buluuga wuxuu noqon doonaa wax ka badan 250 g
Sida loo diyaariyo dalagyada
Si aad u bilowdo, miraha waxaa lagu hubiyaa biqilka. Qiyaastii bil ka hor beerashada, 15 xabbo ayaa la doortaa, ku duudduubay maro oo lagu qooyey biyo diirran. Fasax shan maalmood, si joogto ah uumi. Ka dib markaa, qiimaha biqilka waa la qiimeeyaa. Waxyaabaha abuurka ah waa in lagu ridaa iyada oo la isticmaalayo xal of kiriimiga kalluunka 15 daqiiqo gudahood. Si aad u hesho caleemaha degdeg iyo saaxiibtinimo, abuur ah waa in la diyaariyaa. Waxay aad u yaryihiin, markaa way adag tahay in lala shaqeeyo. Bannaanka u khibrad badan ayaa waraaqda musqusha ku gooyey saddex qaybood oo dhererkoodu dhereran yahay oo ku dhajiyo abuurka. Dhuxul macaan ayaa laga sameeyey kareemka baradho, kaas oo lagu qasi karo bacriminta adag ee AVA.
Isticmaalka siriinjaha, xabagta waxaa lagu daboolayaa warqadda fogaan ah oo ku dhow 5 cm Adigoo isticmaalaya cambe, miraha waxaa lagu soo bandhigayaa jinka. Ka dib markii cajalad la qalajiyey, waa in si taxadar leh loo duubaa oo loo geliyaa bac caag ah. Thanks to nidaamkan, waxaa suurtagal ah in la helo geedo aan khafiifin.
Ma taqaanaa? Basasha ayaa magacan ku helay xaqiiqda ah in muuqaalka uu u eg yahay garka.
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beerayo
Beerta laga beerto ee suuq-geynta ee abuurka ah ee dhulka ayaa la sameeyaa bisha Abriil. Tani noocyo kala duwan oo basasha ah ayaa jecel dhulkii hawada oo aysidhka dhexdhexaad tahay. Si taas loo sameeyo, marka la eego qiyaasta 50 g halkii mitir oo labajibbaaran, qoryaha qoryaha ayaa la soo saaraa oo si wanaagsan loo daboolay. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad carrada daweyso adoo isticmaalaya antifungal, sida Fitosporin. Grooves waxay u baahan tahay in la sameeyo qiyaastii 2 cm oo qotodheer iyo jilbaha waraaqo kor u dhaafaya iyaga. Si tartiib ah ugu rusheey dhulka iyo biyaha si fiican. Sariirta waa inay ahaato mid la daboolo qalab gaar ah ama filim si loo ilaaliyo dalagyada laga yaabo inay dhaxan tahay.
Daryeelka Dheeraadka ah
Bandhiggu waa noocyo kala duwan oo basasha ah, oo u baahan in uun lagu beero si taxaddar leh, laakiin sidoo kale daryeel habboon.
Waraabinta waa in la sameeyaa marka ciidda ay soo baxdo, laakiin aan u oggolaan in ay si buuxda u qalajiso.
Waa muhiim! Dhammaadkii Luulyo, waraabinta waa inay istaagto si aysan nalalka aaney biyaha lahayn. Tani waxay si xun u saameeysaa nolol maalmeedka dhaqanka.
Ciidda waa lagama maarmaan ka dib markii waraabin kasta. Sidoo kale waa lagama maarmaan in la soo saaro haramaha. Si aad u ilaaliso qoyaanka ciidda waxaa lagula talinayaa inay mulcho. Hay ama dhuudh ayaa si fiican u shaqeeya.
14 maalmood ka dib markii laga beerto dalagga, waxaa lagama maarmaan ah in la bacrimiyo ciidda iyadoo la isticmaalayo Doodwanaag. Ama waxaad samayn kartaa Bacriminta adag, oo ay ku jiraan potassium, nitrogen iyo fosfooraska. Nidaamkan waa in la sameeyaa ugu yaraan saddex jeer inta lagu jiro beerista dhaqanka.
Baro naftaada adoo adeegsanaya agrotechnik ee noocyada kale ee basasha: kalluunka, batun, slizuna, shnitta, caleenta.
Sida loo ilaaliyo basasha cudurada iyo cayayaanka
Cudurada ugu caamsan ee noocaan kala duwan ayaa ah duufaan. Waxaa la arkay inta lagu jiro Bisaylkiisa ee khudradda. Xididdadiisa waa la jiidayaa, basasha si dhakhso ah ayey u dhintaan. Haddii cudurkan horeba u muuqday, dhirta ay saameeyeen waxay u baahan yihiin oo keliya in la saaro. Basasha ayaa sidoo kale lagu dhaawici karaa smut - jilicsanaanta madow ee madow waxay u muuqanaysaa caleemaha. Cuduradan waxaa looga hortagi karaa iyadoo la ilaalinayo dalagyada beeraha iyo si fiican u waraabinta dalagyada. Cayayaanka ee basasha waxaa ku jira shilinta, boodboodka, aboorka basasha iyo duulimaadka, iyo sidoo kale nematode.
Waa muhiim! Si loo ilaaliyo dalagga dalagyada basasha, waxaad u baahan tahay inaad karootada ku xiga ku xigto. Naxdintiisa ayaa ka cabsanaysa cayayaanku.
Si looga hortago dhacdooyinka cayayaanka, waxaa lagama maarmaan ah in si habboon loo diyaariyo wax beerto iyo carrada. Haddii ay horeba u muuqdaan, ka dibna waad ka takhalusi kartaa adoo adeegsanaya alaabta nafleyda, sida Agrovertin, Fitoverm.
Iyadoo beerista ku haboon ee abuurka iyo daryeelka ee kala duwan ee Exichen, in 60-80 maalmood waxay noqon doontaa suurtogal ah in la goosho oo ku raaxaysta basasha.